Inventor uLloyd Ray - Ukuphucula amaDustpans
Inventor uLloyd Ray
Inventor uLloyd Ray Uphuculo olutsha kunye noluncedo ku-Dustpans
Umvelisi waseAfrika-waseMelika uLloyd Ray, owazalelwa ngowe-1860, unelungelo lobungcali olutsha kunye noluncedo ekuphuculeni.
Into encinci iyaziwa malunga nemvelaphi nobomi bukaLloyd Ray, kodwa kucacile ukuba wayenakho ukucinga ngaphandle kwebhokisi ukulungisa iingxaki. Kule meko, ingxaki yayingumntu omibini - ukucocwa kwaba ngumsebenzi ongcolisayo ukuba kufuneka ube khoboka ezandleni zakho nasemadolweni. Kwakhona, kwakunzima ukulawula nokuqokelela ukungcola.
Ukwakha i-Dustpan engcono
Into ebaluleke kakhulu yoyilo lukaRay kukuba yayixazulula iingxaki zombini. Isibambiso eside senza ukuba kucoceke kakhulu kwaye kulula ukucoceka, kwaye ibhokisi yokuqokelela insimbi yayithetha ukuba udoti unokwenziwa ngaphandle kokufuna ukulahla ilahleki yonke imizuzu embalwa.
Uluhlu lukaRay lwalufumana ilungelo lobunikazi ngo-Agasti 3, 1897. Ngokungafani neentlobo zangaphambili zothuli, inguqu yamaRay yongezwa kwisibambo esavumele umntu ukuba alahle udoti kwi-pan ngaphandle kokungcola izandla zakhe. Ukongezwa kwesibambiso kwenziwa ngeenkuni, ngelixa isitya sokuqokelela kwi-dustpan sasinsimbi. Ilungelo lobunikazi bakaRay ngenxa yothuli lwayo lwalusisigxina se-patent yesi-165 kuphela esiza kukhutshwa e-United States.
Ingcamango kaRay yaba yithemplate kwezinye izinto ezininzi. Ngokuqinisekileyo ayitshintshi malunga neminyaka eyi-130 kwaye ibaluleke kakhulu isiseko sabahlaziyi bamhlanje abaxhasiweyo, abathandwa ngabanikazi bezilwanyana emhlabeni jikelele.
Ngubani owasungula umkhumbi?
Imifanekiso esuka kwiNguqulelo yeShishini
Imbali ye-TV Dinners
Ukukhusela iPin Pin
Imbali yeAyili yeGinger
Ngubani o wavula iCleve?
Imbali ye-Cheese Slicer
Ukubhala iPhepha malunga neNkcazo yendalo esingqongileyo?
Iintlobo zeBhaktheriya Eziphila Ngomzimba Wakho
Ukudansa uMoya oyi-Halloween i-Science Science Magic
Ngaba Unomnye UYobhi! (kwaye Ukwahluleka Ngokubonakalayo)
Ukhonza I-Hit Ping Pong Net: Ngaba Kuvumelekile?
Ukusebenzisa i-Spinnerbaits ukufumana iBass
Umzekelo wesakhiwo sika Lewis
Uninzi lwelizwe lezopolitiko Iingoma
Uvavanyo oluvuthiweyo lweDickey-Fuller Test
Iimpawu ze-10 eziphezulu zeMigangatho yamaPopu
4 Iindaba malunga neGeneration Gap
Kirei - Iimpawu ezilula zaseJapane
I-Libra neePisces Uthando olufanelekileyo
I-Case of Breast Larvae Infestation
Yiyiphi i-Animal Biggest in the Ocean?
Ukuqikelela ukuba yiyiphi imoto esetyenzisiweyo
Ierhasi (Hordeum vulgare) - Imbali yeNdlu yayo yasekhaya
Ngaba Ngaba Ufuna Ukwazi Ukwazi Ukuhamba Ngendlela Yokutya?
Iingoma zeKrismesi eziPhambili zelizwe
Imbali ye-Hip-Hop: 1925 ukuya kwangoku
I-Amtrak inikezela ngexabiso lentengo yabafundi